नेपालबाट को-को जाँदैछन् टोकियो ओलम्पिकमा ? - Thulo khabar
नेपालबाट को-को जाँदैछन् टोकियो ओलम्पिकमा ?
२९ असार, काठमाडौं । टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको तर्फबाट खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी गरेर २६ सदस्यीय टिमले सहभागिता जनाउने भएको छ । जसमध्ये पाँच खेलाडी र चार जना प्रशिक्षक रहने नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।
खेलाडीतर्फ पौडीका गौरिका सिंह र एलेक्जाण्डर ग्याडिमाड शाहले सहभागिता जनाउनेछन् भने सुटिङकी कल्पना परियार, जुडोकी सुनिया भट्ट तथा एथ्लेटिक्सका सरस्वती चौधरी ओलम्पिकमा सहभागी हुनेछन् ।
यस्तै प्रशिक्षकतर्फ पौडीका शंकर कार्की, सुटिङका असिम यादव, जुडोका सूर्यनारायण श्रेष्ठ र एथ्लेटिक्सकी इन्द्रकुमारी मल्ल रहेका छन् । जसमध्ये पौडीका दुई र एथ्लेटिक्सका एक जना खेलाडीले ‘युनिभर्सियालिटी प्लेस’ अन्तर्गत खेलमा सहभागिता जनाउनेछन् । बाँकी दुई खेलाडी भने आमन्त्रित अर्थात् वाइल्ड कार्डको आधारमा सहभागी हुने जनाइएको छ ।
ओलम्पिकमा नेपाली टिमको सेफ द मिसन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवाल रहनेछन् ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका तर्फबाट नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले सहभागिता जनाउनेछन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्द राजवैद्य, उपाध्यक्षद्वय तेजबहादुर गुरुङ र सुनिलकुमार श्रेष्ठ, सहमहासचिव पिताम्बर तिमल्सिनालगायत टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुनेछन् ।
यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपाने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष शिव कोइराला, मेडकल टिमबाट डा. नविशमान सिंह प्रधानलगायत पनि टोकियो जानेछन् ।
टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने टिमको तयारी २०१९ को मे महिनाबाट शुरु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले प्रदान गर्ने ओलम्पिक छात्रवृत्तिमा ७ खेलका १२ जना खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो ।